July Dream: Be quick!
ဖတ်သွားတယ်။ ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ စိတ်မကောင်းဘူး. သက်ပြင်းချသွားတယ်။
သက်ပြင်းတွေ ခဏ ခဏ ချမနေနဲ့အုံးနော်။ တော်ကြာ ရုပ်တွေရင့်သွားလို့ မလှတော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အဟီး...
အင်း.ပေါက်ပင်ဘာကြောင့် ကိုင်းရတယ်..ဆိုတာကို သွားသတိရလိုက်တာပါပဲလေ...
အခုမှပဲ ကြားဖူးတယ်... စိတ်မကောင်းပါ
အရင် Health n Beauty Store မှာလုပ်တုန်းကလည်း အင်ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်း မတတ်တဲ့သူတွေ ခဏခဏလာမေးလို့ ဆေးပေးလိုက်၊ စမ်းသပ်တဲ့ဟာပေးလိုက်နဲ့ ကြုံခဲ့ဖူးပါ့။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဘာသာပြန်တပုဒ် ဖတ်သွားပြီ
မြန်မြန်လေး မြန်မြန်လေး ခေါင်းစဉ်တွေ့လို့ အပြေးအလွှားလာဖတ်ပါ၏။ ဟမ်..လူဇိုး..
ဟင်းးးးးးးးးး .. စိတ်မကောင်းစရာပဲနော် .. ဘာပြောရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး ..
ဘာသာပြန် သတင်းစာ ဆောင်းပါးလေးကို
ရုန်းကန်နေရတဲ့ ဘ၀ကို စာနာနားလည်ပါတယ်။
အတော်ဆိုးတာပဲ.. အရင်က စလုံးမှာ လိုင်စင်ရတွေပဲ redlight area မှာ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ သူ့အလုပ်သူလုပ် ရှိတယ် ထင်တားတာ..တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စလုံးလည်း စည်းကမ်းပိုပိုပျက်လာပြီနော်..
ဘယ်လိုခံစားရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ ကိုယ့်မြန်မာမိန်းကလေး အိမ်ဖော်တွေ အတွက်ပိုစိုးရိမ်မိ တယ်။
ဘိန်းရောင်းပြီး ဘုရားလူကြီးလုပ်ကြတဲ့သူနဲ့ ယှဉ်ရင် သူ့ ကိုယ်သူရောင်းပြီး ပြည့်တန်ဆာလုပ်တဲ့ ရိုစ်က အများကြီးသာပါတယ်။
သက်ပြင်းချမိတယ်..။ ရို့စ်ရဲ့လစာက 350၊
မြန်မာမိန်းကလေးတွေရဲ့ လစာက 300။
ဒါပေမယ့် မြန်မာထဲမှာတော့ ရှိမယ်မထင်ပါဘူးလေ...။
မှတ်ချက်။ ။ ရုပ်မရင့်ချင်သော်လည်း သက်ပြင်းက ချပြီးဖြစ်နေပါသည်။
strike မန့်တာဖတ်ပြီး ပြုံးရပြန်သည်။
ပေါက်ပင် ဘာကြောင့် ကိုင်းရတယ်။
အိမ်ဖေါ်လာလုပ်တဲ့ အင်ဒိုမတွေ ဒီမှာ သရမ်းတာများတယ်။ အများကြီးကြားဘူး၊ တွေ့ဘူးတယ်။ ကုလားတွေ၊ နိပေါတွေ၊ မြန်မာတွေနဲ့ တလတခါ အားလပ်ရက်အပြင်ထွက်ရင် ငွေလဲမကုန်၊ လက်ဆောင်လဲရ၊ စိတ်လဲကျေနပ်ရဆိုတာမျိုး လုပ်ကြတယ်။ အကုန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေလဲရှိပါတယ်။ လည်တဲ့သူတွေ များတာပြောတာ။
ဒီလို အလုပ်မျိုး မလုပ်ချင်ပါဘူး..
ကံအကျိုးပေး နဲ့ ဝဋ် ကတော့ ရှိနေဦးမှာပဲလေ..
ပေါက်ပင် ဘာကြောင့်ကိုင်းရလဲ ဟင်... ဗျိုင်းက ဘယ်သူလဲ ခင်ဗျ။
အခုဇာတ်လမ်းမှာ ရို့စ်ကို လက်ဆောင်တွေပေး ကြေးကြီးကြီးပေးပြီး အဝေးမြေရောက်နေတဲ့ ဖောက်သည်အကြီးအဖြစ် အားတက်သရော ကူညီပေးခဲ့တဲ့ Strike ကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
လောကကြီးမှာ ဒါမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေ အများကြီးပါပဲ။ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိပါတယ် ခင်ဗျ။
ကိုဖြိုးမော်လည်း သူတို့တွေကို ဈေးရောင်းဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိနေရင် ရေးတင်ပါလား။ ဗဟုသုတပေါ့ ခင်ဗျာ။
စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
မြန်မြန်လေး ဆိုတိုင်း မြန်မြန် မလာပါနဲ့ဗျာ။ အခုတော့ ကျွန်တော် လူဇိုးဖြစ်ရပြီပေါ့။ အဟက်...
တခုခုတော့ ပြောခဲ့လေ။ ဘာပြောရမှန်း မသိတာတော့ မကောင်းဘူး ခင်ဗျ။
ဘ၀ဆိုတာ ဘကုန်းနဲ့ဝလုံးပဲ မဟုတ်တာ အသေအချာပဲ ခင်ဗျ။
လူဆိုတဲ့ အမျိုးကိုက စည်းကမ်းဖောက်တတ်တဲ့ သဘာဝ ရှိတတ်လို့ အခုကေ့စ်မှာ စလုံးရယ်လို့ အထူးအထွေ အပြစ်မတင်ချင်တော့ပါဘူး။
သက်ပြင်း ၂ ချက် ချသွားတော့ ရုပ် နှစ်ခါ ပိုရင့်သွားမှာကို အားနာမိနေတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ အိမ်ဖော်တွေကို ဒီထက်မက စည်းကမ်းတင်းကျပ်မှာကိုတော့ မြင်ယောင်နေပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းကို အောက်တန်းကျတဲ့ အလုပ်အဖြစ် ကျွန်တော်လည်း မနှိမ်ပါဘူး ခင်ဗျ။
လက်ရှိအချိန်မှာ ရုပ်က ရင့်နေပြီးသား ဆိုရင်တော့လည်း မထူးဇာတ်သာ ခင်းလိုက်ပါတော့။ ကြိုက်သလောက် သက်ပြင်းချသွားပါတော့ ဗျာ။ အားမနာပါနဲ့။
ကျွန်တော်တော့ မြန်မာအိမ်ဖော်တွေ အကြောင်း မသိပါဘူး ခင်ဗျ။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ထင်ပါတယ်။ ပူညံ့ပူညံ့တွေ မကြားရသေးဘူးခင်ဗျ။
ဒုက္ခနဲ့ သုခ ဒီလိုပဲ ဒွန်တွဲနေမယ် ထင်တယ်။ ကိုယ်တွေကတော့ ဒုက္ခလို့ ထင်ပေမယ့်...
ကျွန်တော်လည်း ကြားဖူးနားဝတော့ ရှိပါတယ်။ အစက ဖိလစ်ပိုင်တွေလို့ပဲ ထင်ထားတာ။ အင်ဒိုတွေလို့ မသိထားဘူး။ အခုလိုမျိုး သတင်းစာထဲမှ ပါလာတော့ ပြန်လည် ဝေမျှချင်တာနဲ့ အခုလို ဝေမျှလိုက်တာပါ။
ဘ၀မှာ ရွေးစရာ လမ်းမရှိတဲ့သူတွေ အများကြီးပါပဲ။ ကံ ကံ၏ အကျိုးပေါ့။
ကျွန်မတို့ မြန်မာ မိန်းကလေးတွေလည်း ဒီလို အဖြစ်မျိုး မရောက်ပါစေနဲ့လို့ အခါခါ ဆုတောင်းမိနေပါတယ်
သူရတဲ့ ၃၅၀ ကမှများဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ညီမသိသလောက် မြန်မာကနေ အေးဂျင့်နဲ့ အိမ်ဖော်လာလုပ်တဲ့သူတွေ ပထမ ၆လလောက်ကို ၈၀ လောက်နဲ့လုပ်ပြီးမှ ၂၀၀ လောက်ကစရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။(ကြားဖူးတာပါ.. သေချာတော့ မသိပါဘူး)
သွားပါ.. အခုမှ လာမချော့နဲ့. ။။အဟင့်
အင်း.... မရိုးနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေပါပဲဗျာ။ ဖတ်ပြီးစိတ်မကောင်းးဖြစ်သွားတယ်။ ဒိထက်ဆိုးတာက ယိုးဒယားမှာဗျ တော်ပြီဗျာ
စိတ်ပျက်စရာတွေ စဉ်းစားရင် ဒေါသဖြစ်တယ်
Thanks for this. I've been away from singapore, and haven't read this piece of news.
It makes me sad.. but inastrange way, i admire them for plucking up the courage to sacrifice themselves for the sake of their family.